Zvakavanzika zvemabhegi evasikana ekuzora - Nhau - Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Zvakavanzika zvemabhegi evasikana ekuzora
Muchokwadi, iwe haufanire kuunza zvinhu zvakawandisa panzendo dzebhizimusi ~ Vasikana vanogara vachinyudza huropi hwavo kuchengetedza imwe nzvimbo yemabhegi avo ekuzora. Nekufamba kwenguva, vanozove neaya matipi ~
Zvakareruka zvinouya kutanga
Ichi chiitiko chinoda kuti vasikana vabvise zvinhu zvinogona kubviswa pasina kuzeza nepo vachichengetedza rakakosha ganda rekuchengetedza uye hukuru hwekugadzira mhedzisiro. zvakaita se:
Zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda
Izvo zvakanyanya kudikanwa: yekuchenesa, tauro rekumeso, moisturizing lotion, essence, ampoule, kumeso kumeso
Inonyanya kudikanwa: sunscreen, yekuzora kubvisa, pamutsago uye mvura hwaro, lipstick, tsiye yepenzura, mumvuri weziso, padonje pad
Ehezve, akasarudzika ganda mhando senge inononoka ganda uye acne-inowoneka ganda inoda kuwedzerwa Sampuli, yekufuka chipfeko
Paunenge uchitenga zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda, munhu wese anofanira kunge akachengetedza akawanda masampuli, ayo anonyanya kubatsira kana uchifamba pane bhizinesi! Chokwadi pane zvinonhuwirira zvinoshandiswa nevasikana vazhinji! Iyo mini bhodhoro iri nyore kutakura uye kuisa zvekare chero nguva.
Ko kana pasina madhoma akawandisa? Kufamba makiti zvakare sarudzo yakanaka kwazvo! Dzimwe nguva isu tinonyatsoda kuyedza zvigadzirwa zvemutengo wakakwira kubva kune imwe mhando yemhando yepamusoro, uye tinokurudzirawo kuti utenge chipfeko chekufamba, uye haina kunonoka kutanga mushure mekutarisa maziso ako ~
Nhanho inotevera ndeye kudzidza kurongedza, kudurura hombodo hombe dzekubvisa makeup, mafuta ekuzora, nezvimwe kumba mumabhodhoro akapatsanurwa woaburitsa. Iyo mvura haifanirwe kudarika 100ml, iri nyore uye inokurumidza kupasa kuongorora kwekuchengetedza.
Chinhu chimwe nekushandisa kwakawanda
Kana iwe uchida kubatsira kudzikisira pasi bhegi rako rekuzora, iwe unofanirwa kushandisa mamwe matanho asingaregi! Semuenzaniso, shandisa kumeso kumeso pane lotion, pamutsago kuwana pekutanga uye mvura nheyo, muromo uye dama maviri-shandisa ziso mumvuri, eyebrow poda yeziso makeup uye kugadzirisa ... Zvinoenderana neyako yekugadzira zvido, shandisa zviripo zvigadzirwa kugadzira musanganiswa wakawanda, pachave nekushamisika ~
Edza kusaunza akasununguka discs
Izvo zvichiri kudikanwa kuyeuchidza vasikana vasina hanya: Tichifunga nezve dambudziko remapundu, edza kusaunza akawanda asina kusimba ehupfu discs! Semuenzaniso, kirimu ziso mumvuri rinogona kutsiva ziso mumvuri kuparadzira, zvichideredza zvisina basa kurasikirwa.
Mushure mekutaura nezve aya matipi, hongu, ini ndichadyara bhegi rekuzora uye bhegi rekuchengetedza ganda kune wese munhu!
Pakufamba, tinowanzo simbisa nekuvhura masaga matatu ezvinhu zvatinoda kuunza: bhegi rekuzora, bhegi rekuchengetedza ganda, uye bhegi rekuwacha. Izvo zvigadzirwa zvakarongedzwa mumapoka akasiyana, saka zviri nyore kushandisa. Tichitaura nezvemabhegi ekuzora, hombodo yedu yekushongedza bhegi ndiyo yekutanga kukurudzirwa, iyo ine mikana miviri mikuru!
Inoshanda cosmetic bhegi, ine yakasimba kupatsanura basa uye nyore kutakura maitiro, saizi saizi, uye dzimwe nguva kunyange kuisa pasi bhurasho, fry huku inoshanda!
Yakakura inokwana grid
Iri bhegi rakaumbwa nemuviri ndiro rakanyanya kukodzera, uye rakakodzera kwazvo sebhegi rekuunganidza yezvigadzirwa uye zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda.
Yapfuura:Diki coup rinokudzidzisa iwe kuchengetedza mabhegi kuchengetedza nzvimbo
Tevere:Vakadzi vanosarudza sei mabhegi?